संविधानविपरीतका माग सरकारले पूरा गर्न सक्दैन : मन्त्री पण्डित
काठमाडौं, २६ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानभन्दा बाहिर गएर कसैले माग गरेर त्यस्ता माग सरकारले पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘संविधानको कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनर्सरचना’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमा मन्त्री पण्डितले संविधान भन्दा बाहिर गएर कसैले माग गरे सरकारले पूरा गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
संघीयता कार्यान्यनका लागि सरकारले तीनै तहमा संरचना निमार्ण गरेको र सुझाव सबैको स्वीकार्य हुने तर दबाब कसैको स्वीकार्य नहुने समेत मन्त्री पण्डितको भनाइ छ ।
मन्त्री पण्डितले सडकको भीडले सरकारलाई संविधान विपरित गएर दबाब दिइरहेको समेत आरोप लगाएका छन ।
‘संविधान बनेर कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । कार्यान्वयन भइसकेको छैन । हामी संविधानलाई आत्मासाथ गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । डाक्टरले अप्रेसन गर्नु लाग्दा अलिकति त दुःख छ नि ? अलिकति दुःख भन्दैमा अप्रेशन नै नगर्ने त ? डाक्टरलाई हामी भगवान मान्छौँ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘तर मेरो जिउमा चलाउँदा मलाई नै सिध्याइदिन्छ कि भन्ने ठान्ने हो भने स्वास्थ जीवन हुँदैन । संविधानले नै पुनर्सरचनाको माग गरेको छ । नभए त संघीयता कार्यान्वयन नै हुने थिएन ।’
समय क्रमसँगै पहिचान पनि परिमार्जित हुँदै जाने भन्दै मन्त्री पण्डितले संविधान मान्दैन भन्न नमिल्ने तर्क समेत गरे ।
‘केही–केही साथीहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ हाम्रो पहिचान गुम्ने भयो भनेर । संविधान बनिसकेपछि कति पहिचान गुमेको छ ?,’ उनले भने,‘संविधान भनेपछि पनि त पहिचान गुमेको छ । पहिलेकै पहिचान पक्रेर बस्ने हो भने संविधानलाई मानेको र अंगालेको हुँदैन । संविधानलाई मान्दैन भन्न मिल्छ ?’
कामचोर ठेकेदारलाई सरकारले संरक्षण गर्‍योः पौडेल
सचिन तेन्दुलकरले पशुपतिनाथको दर्शन गरे
वेल्सले अजरबैजानविरुद्ध हान्यो दुई गोल
ग्रिसका युवा खेलाडी स्टेफानोस टित्सीपास फाइनलमा प्रवेश, फेडेरर पराजित
भोट माग्दै सिटौलाले भने- लोभ मोहमा नफसेका पौडेललाई एकपटक जिताएर हेर्नुस्
नेपाल जस्तो सुन्दर देश आउन पाउँदा खुसी छुः सचिन तेन्दुलकर
नेपालले ५ बर्षमा भारत र १० बर्षमा चीनलाई छुन्छ : नेता गाैतम
माैसम खबर : देशभर हल्का वर्षाको सम्भावना
ओलीलाई देउवाको प्रश्न- राष्ट्रवादको नारा दिने तर कालापानीमा लम्पसार पर्ने?
५ थान अत्याधुनिक हतियार बरामद, गोठमा किन लुकाएर राखिएको थियो ?
संस्कृत भाषा ज्ञानको खानीः नेता नेपाल